Realme ga-ebido ekwentị ya na Europe n'oge ọkọchị a Gam akporosis
Realme na-ekwupụta ọbịbịa ya na Europe: Onye asọmpi ọhụrụ maka Xiaomi?
Realme na-akwado maka mgbasawanye mba ụwa. Branddị a, enyemaka nke OPPO, na-ere ekwentị ya ugbu a na India. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwere atụmatụ ịmalite ire n’ahịa ọhụrụ. N'izu gara aga a gosipụtara na ụlọ ọrụ ahụ na-akwadebe mee ngwa ngwa na China n'oge na-adịghị anya. Ihe ha onwe ha mara ọkwa. Mana ọ gaghị abụ naanị ahịa ha ga-ebido n'ọnwa ndị a.
Onye isi nke Realme kwadoro na ha nwere na-ezube ịmepụta ekwentị ha na Europe. O kwuru ya na N'ajụjụ ọnụ, nke o kwukwara mgbe ọ na-ezube ịmalite ire ekwentị ndị a. Onye ndorondoro ohuru na-acho maka ụdị dika Xiaomi ma ọ bụ Redmi.
Akara a amaghi nke oma nye otutu ndi ahia. Ọ bụ ezie na n'izu ndị na-adịbeghị anya, ha ahapụlarị anyị ọtụtụ ụdị nke mmasị, dị ka Ezigbo 3 Pro o ihe C2. Modelsdị abụọ na-ezute nke ọma n'etiti ọkwa ha, nke ahụ na-abakwa nnukwu uru maka ego, nke na-eme ha nhọrọ dị mma.
Dika onye isi ulo oru a kwuru n’ajụjụ ọnụ a, mbata gị na Europe dị ezigbo nso. Ebe ọ bụ na ọ na-azọrọ na ọ ga-abụ tupu njedebe nke ọkara mbụ nke afọ a. Ya mere, ihe niile na-egosi na na June ụdị mbụ nke ika ga-amalite ịmalite na ahịa Europe. N'oge amabeghị igwe ọ bụla n'ime katalọgụ ya nke izizi iru ụlọ ahịa. N'echiche a, anyị ga-echere ichopụta karịa.
Enweela aha ndị ọzọ banyere atụmatụ ahịa nke Realme ga-agbaso mgbe ha malitere na Europe. Branddị enweghị ebumnuche nke ịbanye nkwekọrịta na ndị ọrụ. Yabụ anyị nwere ike ịzụta ekwentị ha n'efu, n'ụlọ ahịa. O yiri ka nke mbụ ha ga-amalite ire ere na ọwa ntanetị wee ruo ụlọ ahịa. Agbanyeghị na ekwughi ihe ọ bụla gbasara ibe weebụ ma ọ bụ ụlọ ahịa anụ ahụ ga-abụ nke anyị nwere ike ịzụta ekwentị ha. Mana a na-atụ anya na n'oge na-adịghị anya, a ga-enwe ozi ndị ọzọ gbasara nke a.
Realme ga-emepe ụlọ ahịa mbụ ya n'afọ a
Mwepụta a na Europe na-eme Realme nwere ike gosipụta dị ka onye asọmpi maka Xiaomi. Chinesedị ndị China emeela aha maka aha ya n'ahịa, n'ihi ọnụ ala ya. Karịsịa ụdị ya dị ala na nke etiti nwere ezigbo nnabata na ahịa. Akụkụ nke onye asọmpi a ruru ugbu a, ya na nzọ yiri ya. Modelsdị ugbu a, yana ọnụahịa dị ala mana nkọwapụta dị mma. Yabụ ọgụ na-aga na mpaghara ahịa a. Ọ bụ ezie na Xiaomi ji uru nke inwe ọnụnọ guzosiri ike, na mgbakwunye na ịnwe ọtụtụ ụlọ ahịa na Spain, nakwa n’ahịa ndị ọzọ dị na Europe, dịka France, Italytali ma ọ bụ Gris.
Mana enwere mpempe ozi dị oke egwu, nke onye isi ụlọ ọrụ ahụ na-akọrọ. Ebe ọ bụ na ọ na-ekwu na 40% nke ndị ọrụ ya bụ ndị na-esi na ekwentị Xiaomi ka otu n'ime Realme. Eziokwu nke a ghaghi iburu n'uche, mana nke ahụ na-egosi na ndị na-azụ ahịa na-ahụ ụdị abụọ ahụ dịka ụdị ndị yiri ya. Nke a nwere ike ịbụ ihe na - eme mgbe akara ahụ malitere na Europe.
Maka ugbu a amaghi nke ahia nke di na Europe ka a gha emeghe oru Realme. Spain ga-abụrịrị otu n'ime ahịa ndị a. Karịsịa ebe ọ bụ na anyị nwere ụdị ndị China dị ka Xiaomi na-arụ ọrụ na ya, nke yiri ka ọ bụ otu ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na a haziri mbido ha tupu njedebe nke ọkara mbụ nke afọ, ọ gaghị ewe ogologo oge iji kwupụta nke ọma karịa ma a ga-ebupụta ha na Spain ma ọ bụ na ha agaghị. Anyị na-atụ anya ịmatakwu banyere ọdịda nke ụlọ ọrụ n'oge na-adịghị anya. Obi abụọ adịghị ya, ọ nwere ike ịbụ nzọ na-adọrọ mmasị na nke a. Kedu ihe ị chere gbasara atụmatụ ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme na-ekwupụta ọbịbịa ya na Europe: Onye asọmpi ọhụrụ maka Xiaomi?
HTC chọrọ ịnwụ na-egbu: ga-ebupụta ekwentị ọhụrụ na teknụzụ blockchain